बेरुजू ६ खर्ब ८३ अर्ब नाध्यो, प्रत्येक नेपालीको काँधमा ३१ हजार ऋण (महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित) | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर बेरुजू ६ खर्ब ८३ अर्ब नाध्यो, प्रत्येक नेपालीको काँधमा ३१ हजार ऋण (महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित)
on: April 12, 2019 मुख्य खबर, समाचार, हेर्नैपर्ने
बेरुजू ६ खर्ब ८३ अर्ब नाध्यो, प्रत्येक नेपालीको काँधमा ३१ हजार ऋण (महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित)
चैत २९, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको कुल बेरुजू रकम रू. ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । आव २०७३/७४ मा कुल बेरुजू रू. ५ खर्ब ८ करोड रहेको थियो । महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार गतवर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ३६ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माका अनुसार सरकारको अद्यावधिक बेरुजू रू. ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रहेको छ भने कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रू. ३ खर्ब ६ अर्ब १८ करोड रहेको छ । उनले भने, ‘समायोजन र फर्छ्योट गरिएको रकम घटाउँदा पनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा थप रू. १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजू थपिएको छ ।’ सरकारले आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको र संसदलाई समेत बेवास्ता गरेको पाइएको महालेखापरीक्षक शर्माले बताए । उनका अनुुसार गत असारको २५ पछि मात्रै पनि रू. १८ अर्ब खर्च गरेको र रू. ७५ अर्ब ५५ करोड रकमान्तर गरिएको छ ।
तस्वीर : प्रकाश केसी/आर्थिक अभियान
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि गत वर्ष रू. ५० अर्ब ६८ करोड ८२ लाखको १ हजार ७९५ ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा बन्दोबस्त गरेको पाइएको महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तेस्रो चौमासिकमा गरेको ठेक्का बन्दोबस्तमध्ये रू. १९ अर्ब २८ करोड ३ लाखको १९३ ठेक्का असार महीनाको छ ।
गतवर्ष शहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह, खानेपानी र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रू. ५४ अर्ब ५७ करोड २० लाखको २ हजार ५८ ठेक्का लगाएको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक नेपालीको काँधमा रू. ३१ हजार ७५० सरकारी ऋण दायित्व देखिएको छ । कार्यालयले शुक्रवार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व रू. ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड पुगेको देखिएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा एक तिहाइले बढी हो ।
आन्तरिक ऋण रू. ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण रू. ६ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रहेको प्रतिवेदननमा उल्लेख छ । उक्त ऋण दायित्वलाई रू. २ करोड ८८ लाख २९ हजार नेपालीलाई भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति रू. ३१ हजार ७५० हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा प्रतिव्यक्ति ऋण रू. ७ हजार ४३ ले बढेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाबिना नै सोझै खरीद गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको पनि उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खरीद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरीद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, गतवर्ष विभिन्न सरकारी निकायले संरचना निर्माण र मालसामान खरीदलाई टुक्रामा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा बेगर रू. २ अर्ब ५ करोड ४५ लाखको खरीद गरेको पाइएको छ । ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरीद कार्य गराउनु नमिल्ने भएपनि यो वर्ष शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका ११६ कार्यालयले सोझै खरीद गरेको भेटिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा व्यापार घाटा रू. ११ खर्ब ६३ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । १ हजार २०० ओटा सुझावसहित शुक्रवार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन १८ हजार पृष्ठको रहेको बताइएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न ६ हजार ६४४ ओटा निकायको रू. ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षण भएको महालेखापरीक्षक शर्माले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश:
घण्टा पर्सात लामिच्याने
अन्धेर नगरी चौपट राजा
टका शेर भाजी टका शेर खाजा
More than 300 billion rupees debt in one fiscal year, this is the proof that country can not afford federalism. How much debt will there be in next four years?…